Gam akporo Kernel Crash na-eme ka mgbọrọgwụ nweta Cybercriminals | Akụkọ akụrụngwa
A ahụhụ afọ abụọ gara aga na gam akporo Kernel nwere ike inye mgbọrọgwụ ịnweta cybercriminal
Paul Aparicio | | android, General
Ọ dị ka ọrụ Google iji chebe ndị ọrụ gam akporo anaghị akwụsị akwụsị. Companylọ ọrụ njin ụlọ ọrụ ọchụchọ na onye nwe sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ na mbara ala na-adọ aka na ntị na onye ọrụ obi ọjọọ nwere ike ịnweta nnabata superuser site na ngwa na-erite uru nke a nche mgbochi gịnị bụ chọpụtara na-erughị afọ abụọ gara aga. Ahụhụ a kpọtụrụ aha dị na Linux Kernel, nke gbasara ebe android Ọ mepụtara.
A mara nsogbu nchekwa ahụ kemgbe Eprel 2014, ọ bụ ezie na n'oge ahụ akpọghị ya "enweghị ike". Ma na February 2015 a chọpụtara na nke a kernel ọdịda ọ nwere mmetụta nchekwa, n'oge nke ha nyere ya njirimara (CVE-2015-1805). Tụkwasị na nke ahụ, nsogbu ahụ adịghị ruo mgbe ngwanrọ ahụ gbanwere gam akporo, ihe ọzọ kpatara na enyeghị ya nnukwu mkpa ruo mgbe ọ gafere obere afọ gara aga.
1 Akụkọ a si ebe dị anya
2 Ihe mgbochi dị n'ụzọ
3 Otu esi echebe onwe gi
Akụkọ a si ebe dị anya
N’ọnwa gara aga, ndị otu Otu CoRE achọpụta na ndị omekome nwere ike iji ya mee ihe a ka ha nwee ike ịnweta mgbọrọgwụ na ngwaọrụ. Onye hacker nwere ohere mgbọrọgwụ a ngwaọrụ nwere superuser ohere, nke bụ ọbụna ukwuu nchịkwa karịa nwe nke ngwaọrụ ma ọ bụ-atọ ndị ọzọ ngwa. Site na iji nsogbu a eme ihe, cybercriminal nwere ike ịnweta ma / ma ọ bụ gbanwee faịlụ ọ bụla na sistemụ arụmọrụ, nke na-adịghị ada ma ọlị.
CoRE Team gwara Google maka ịdị adị nke erigbu na nnukwu ụlọ ọrụ na-achọta malitere ịrụ ọrụ na mpempe akwụkwọ nke ọ gaara etinye na mmelite nche n'ọdịnihu, mana ha enweghị oge iji dozie ya Zimperium, ndị ọrụ nche nke Stagefright chọpụtara, gwara Google na erigbu Ọ dịlarị na Nexus 5, na-eru ya site na ngwa site na Storelọ Ahịa Play na n'oge a ka egbochila.
Google nwere ike igbochi ngwa ọdịnala na-anwa ịnweta mgbọrọgwụ na ngwaọrụ, ma i nweghi ike ikwu ogologo oge ojoo ngwa a na-eme ya ihe. Na nkwupụta nchedo, Google kwuru na “Google gosipụtara nkwenye nke ịnweta mgbọrọgwụ nke ọha na eze na-eji nke a adịghị ike na Nexus 5 na Nexus 6 iji nye ikike dị ukwuu na ngwaọrụ ngwaọrụ. Aha ojii ".
Google weputara nsogbu a na a ogo ogo «Critical», ma ngwa a na-ekwu maka ya abụghị ihe ọjọọ. Ọzọkwa, oke ọkwa dị oke egwu pụtara na ndị ọzọ na-agba ọsọ nwere ike iji otu ihe ahụ erigbu iji gbasaa malware.
Ihe mgbochi dị n'ụzọ
Google eweputala patches iji dozie nsogbu nchekwa a na Android Open Source Project (AOSP) maka nsụgharị 3.4, 3.10 na 3.14 nke gam akporo Kernel. Versionsdị ya na Kernel 3.18 na elu anaghị enwe nsogbu na ọdịda a. A ga-etinye patch ahụ na mmelite nchedo Eprel maka ngwaọrụ Nexus, nke bụ ozi ọma maka ndị ọrụ nwere Nexus, mana ndị ọrụ ndị ọzọ ga-echere ụlọ ọrụ nke ngwaọrụ ha iji wepụta mmelite nke ha. Nke nwere ike were ụbọchị, izu ma ọ bụ ọnwa.
Otu esi echebe onwe gi
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ, ọgụgụ isi bụ antivirus kacha mma. Ihe kachasị mma ime bụ mgbe download ngwa si ukara na-echekwa. N'ihe banyere ngwa ndị ebudatara na Google Play, ọ bụrụ na enwere ngwa dị egwu, Google na-egbochi ya n'onwe ya, yabụ enweghị ike iji ya. erigbu anyị ga-enwe nchebe zuru oke. Ọ bụrụ na anyị ga-etinye ngwa site na mpụga nke Google Play, ọ bara uru ịnweta ya nyocha ngwa site na ntọala ekwentị. Enwekwara nhọrọ na ụfọdụ ngwaọrụ na-enyocha usoro maka iyi egwu, ihe nwere ike imetụta arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ, mana ọ ga-aba uru.
Iji mara ma ọ bụrụ na ngwaọrụ enwetala ihe nchebe nke na-agbazi nsogbu a, ị ga-abanyerịrị ngalaba nche nche nke ekwentị. Ọ bụrụ na mmelite kachasị ọhụrụ na-ekwu Eprel 1 ma ọ bụ karịa, a gaghi enwe nsogbu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, kpachara anya maka ihe ị na-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » A ahụhụ afọ abụọ gara aga na gam akporo Kernel nwere ike inye mgbọrọgwụ ịnweta cybercriminal
3 ndọtị maka Google Chrome nke iji piakota Netflix n'ụzọ zuru ezu
fooView na-enye ụzọ ọhụụ dị mma iji soro ekwentị gam akporo gị na-emekọ ihe